အင်ကြင်းသန့်: ဘလော့ဆိုတာ ? ဘလော့ဂါဆိုတာ ?
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 9:38 PM
အင်ကြင်းပြောသလို စဉ်းစားပြီး ရေးပြီးမှ မတင်ဖြစ်တာလဲ ရှိပါတယ်၊
ဟားဟား ညီမ ရေ ရီရင်းနဲ့ဖတ်နေတာ... ညီမ ရဲ့ ဘလောဂ့်ဂါ လေး ကလည်း အဖြစ်မှန် တွေကို ဟာသ လေး နဲ့ ရေးထားတဲ့ အတွက်ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် ဆက်လက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် ဘလောဂ် လေးထဲမှာ ကိုယ်ပိုင် စာလေး တွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေ
ဘလောဂ်ဂါ ကြီးဟာ မျက်စိကြီးနားကြီး ဆိုတော့ မေးပရစေ ဧရာဝတီ ဟာဘယ်လို အခြေအနေ ရှိပါသလည်း ဘယ်လို ဆက်လုပ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါသလည်း ... ဟားဟားးးးးးးးး
ဘလော့ဂါဆိုတာ ခြိမ်းခြောက်လည်ပင်းညှစ်တတ် သေးတယ် ကြောက်ထှာရှင် ....ဒါနဲ့ဘလော့ဂါတွေစီ အလှူခံအုံးမယ် သဘောကောင်းကြတယ်ဆိုလို့း))
မျက်စိကြီးနားကြီးတာ အဲလိုခြိမ်းခြောက်ချော့ မြောက်လုပ်ကြလို့ နေမှာနော ပြည်လေသံလေးနဲ့ပြောရရင် ဟုတ်မှာာ......ပေါ့ပေါ့ပါးပါးးးးးလေးနဲ့ ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ ကိုယ်ပိုင်လက်ရာလေးတွေ လုပ်ပါအုံး မျှော်နေမယ်နော
အဲလိုခြိမ်းခြောက်လည်ပင်းညှစ်မှာကြောက်လို့ ရှောင်နေပါတယ်ဆိုနော်။း)
ဂျင်းရဲ့ ဘလော့ဂါဆိုတာလေးကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာလေးပါ။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း ဂျင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးကို အမြဲဖတ်ခွင့်ရချင်ပါတယ်။
မှန်၏ ဘလော့ဆိုတာ ကိုယ်တို့ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်လေးပါပဲ ဟိုးး အရင်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ မှတ်စုကိုသူများခိုးဖတ်မစိုးလို့ ဖွက်ရတာအမောပေါ့ ခုတော့လည်း...မှတ်စုဆိုတာတစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေပြီ...။ အဲဒီလိုဖန်ဆင်းသူကို ဘလော့ဂါဟုခေါ်သည်ပေါ့ ဂျင်းလေး....။
ဘလော့ရွာမှာ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ မလည်ဖြစ်တာ ကြာခဲ့ပါပြီ...
ခုတလောတော့ စာတွေ လိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...
(အဲဒါလည်း ဘလော့ဂါလို့ခေါ်ပါတယ်) :D :D
ဒါနဲ့ အလှူခံလာရင် ပုန်းနေမဲ့ ဘလော်ဂါထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါတယ်နော်
အလှူတော့ လာမခံနဲ့ ဒါဘဲ ဟိဟိ။
ဖေ့ဘွတ်ထဲ မျက်နှာအပ်မနေနဲ့။ ဘလောဂ့်ကိုလည်း ကိုယ့်ရည်းစားလို သဘောာထားဦး။
မှန်တာပေါ့... ဘလော့ဆိုတာ တကယ်တော့ဒိုင်ယာရီပါပဲ၊ ကိုယ့်ခေါင်းအုံးဘေးမှာထားတဲ့ ဒိုင်ယာရီနဲ့ကွာတာဆိုလို့ လူအများဖတ်ခွင့်ရှိတာနဲ့ မရှိတာပဲကွာတာပါ။ ဘလော့ဂါဖွင့်ဆိုချက်လေး သဘောကျစွာဖတ်သွားပါတယ် မအင်ကြင်းသန့်....
အင်ကြင်းဘလော့ကို ကျွန်တော် မကြာမကြာ ဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးတာလေးတွေ တော်တော်ကောင်းတယ်။ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်အတိုင်းပဲ။ အင်ကြင်းရေ... ဒီလောက်ဆိုရင် ဂျွမ်းထိုးလို့ ရပြီထင်တယ်။
စတာပါ အင်ကြင်းက တကယ် စာရေးကောင်းပါတယ်။ စာရေးကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ အင်ကြင်းလဲပါပါတယ်။ ကျွန်တော် အင်ကြင်းနာမည့် ထည့်မရေးဖြစ်တာက မကြိုက်မှာ စိုးလို့ ပါ။ စာများများရေးပါ အင်ကြင်းရေ.. စာရေးကောင်းတဲ့သူတွေကို စာများများ ရေးစေချင်တယ်...
ဘာရယ်မဟုတ် မျက်စိလည် ရောက်ရှိလာပြီး ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်လိုက်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်လိုက်နဲ့ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်နဲ့ တော်တော်များများ အချက်တွေ တူနေပါလားလို့ ကောက်ချက်ချမိပါတယ်...။
ကျွန်တော်တော့ သွားလေရာ တွေ့တဲ့သူက လာထူးလဲဆိုတာ အမြဲအမေးခံရသလို၊ စာအုပ်တွေ လက်ဆောင်ရတာတော့ ခဏခဏပါ..။ သေချာတာကတော့ စာအုပ်တွေ လက်ခံရယူခဲ့ပြီး မဖတ်ဖြစ်တော့တာပါပါပဲ...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို သေသပ်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ တင်ပြထားတာကို မှတ်သားသွားပါတယ်....။
ဂျင်း ဘလော့ဆီ စိတ်ပြန်လည်လာတာ ၀မ်းသာတယ်း)) ဂျင်းရေ ဘလော်ဂါ ဟိုတယောက်ကို နင်သိလား ဟ . . . ဘယ်သူ
အော် . .. အင်ကြင်းသန့်ဆိုတာလေ . . ငါ သူ့စာတွေ နှစ်သက်တယ်ဟ အရမ်းကောင်းတယ် နင် သွားဖတ်ကြည့်ဟာ တကယ်ကြိုက်သွားမယ်း)))). . .
ဂျင်းမ ဂျွမ်းထိုးလို့ရပီး ဟားးဟားးဟားးး)))
ကျနော့်ကို ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဆိုတာကို သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးတွေတောင် မသိကြပါဘူး။ သိတဲ့သူတွေကလဲ ဖတ်ပြီး မင်း အပြင်မှာ အေးသဘောက် ဘလော့ထဲ အတော်လေး ပေါကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေပါလားတဲ့။ တစ်ယောက်ကတော့ မဟုတ်တာနဲ့ အချိန်ကုန်ခံနေတယ်တဲ့။ ချီးကျူးကြတာပြောပါတယ်။
ဘာဘဲပြောပြော ဘလော့ရေးရတာ ပျော်ပါတယ်။
အော်အင်ကြင်းသန့် ဆိုတာလား စာရေးကောင်းတယ်နော် အူလိမ့်နေအောင်ရီတယ်သိလား
ပိုစ့်လေးတွေဆို ကွန်ပြူတာထောင့်နေရာလေးမှာ Windowကို သေးသေးလေးထားပြီး ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖတ်ရသေးတာ။ အဲလောက် အလုပ်တွေကြိုးစားနေတဲ့ “ဘလော့ဂါ”ဆိုတဲ့သူကို အလုပ်ခန့်ထားမိမှန်း သူဌေးသာ သိသွားရင်လည်း သူ့ကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ။
ညီမရဲ့ Blooger ဆိုတာရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို နှစ်သက်စွာ ဖတ်သွားတယ် ညီမရေ..။
သူက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး ရေးထားတာပါလားတော့.. :D
"ဘလော့ရဲ့ပိုင်ရှင် ဘလော့ရေးသူ (ကျွန်မတို့အခေါ် ဘလော့ဂါပေါ့)"ဆိုတဲ့ နေရာလေးကို ဖတ်မိတော့.. ဘာရယ်ကြောင့် မသိ.. အဓိပ္ပာယ်ပါပါလေး ပြုံးမိတယ်.. ဟိဟိ.. ခံစားချက်တွေချင်းတူနေလို့ နေမှာပေါ့နော်.. :D
ပြီးတော့ ဘလော့ဂါမကြီးက.. အော်မှားလို့.. ဘလော့ဂါမလေးက အမြှောက်လည်း အတော်ကြိုက်ပုံရတယ်နော်..
အားလုံးကို ခြုံငုံပြီး သုံးသပ်ရရင်တော့.. ပွစိပွစိနဲ့.. အသက် ၁၆ နှစ် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရေးထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲလား.. ခင်ဗျား.. :P:P
@ကိုဆိုဆီ>>>ဟုတ်တယ် ကိုဆိုဆီရေ....စဉ်းစားမိတာတွေ၊ အကြမ်းခြစ်ထားတာတွေ ရှိတယ်။ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင်ကို ရေးပြီးမတင်နိုင်သေးတာ။
@မမရွှေစင်>>>မမရွှေစင်ရေ....ဧရာဝတီဟာ တဖန်ပြန်လည်ပြီး လှပစွာစီးဆင်းနိုင်မှာပါ။ အဲဒီအခါမှာ သူ့အပေါ်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့သူတွေလည်း သူခံစားရတာထက် အဆပေါင်းများစွာ တန်ပြန်ခံစားရဦးမှာပါ။
@မမစည်းစိမ်>>> ဟုတ်မှာာာ...(ပြည်လေသံလေးနဲ့ပဲထပ်ပြောလိုက်တယ်နော်။း))
မသဒ္ဓါ၊ အစ်မမိုးငွေ့နဲ့ ကိုပေါ့ဆိမ့်တို့ ဂျင်းရဲ့ပိုစ့်လေးကို လာဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်....။
@မချော>>> ဟုတ်ကဲ့ မမ....ဒီနေ့ကစပြီး ဘလော့ကို ကိုယ့်ရည်းစားလို သဘောထားလိုက်ပီနော်....။ :D
ချယ်ရီမြေ နဲ့ မျက်စိလည်ရောက်လာတဲ့ Anonymous ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုဘလက်၊ ဗညားနဲ့ မိုးတို့ကတော့ ဂျွမ်းထိုးတာကို ကြည့်ချင်နေပုံရတယ်....ဟီးဟီး
@ကိုကိုမောင်>>> သူကြီးကလည်း အပြင်မှာအေးတဲ့သူက ဘလော့ထဲမှာ ပိုပေါတယ်လို့ အဲဒါက တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်လို့ ပြောလိုက်ပေါ့... :D
စာလာဖတ်ပေးတဲ့ အစ်မ တီတီဆွိ နဲ့ အစ်မ မြသွေးနီ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
@သော်ဇင်>>>သော်ဇင်င်င်င်င်င်(အသံကုန် ဟစ်ရွေ့ အော်)....ဟိုနေ့က အဖွားကြီးလို့ပြောသွားပြီး ဒီနေ့ကျမှ ၁၆နှစ်ကောင်မလေးအတိုင်းပါလား လာလုပ်သွားတယ်။ သိမယ် သိမယ်.....ဘလော့ဂါဆိုတာ လက်သီးလည်း ပြင်းတယ်နော်.ဟင်းဟင်း....
အမလေးဗျ.....လည်ပင်းအစ်နေပြီ..နည်းနည်းလျှော့ပါဦး.... :P ကဲ...ရေးရတော့မှာပေါ့လေ ဘာတတ်နိုင်ပါ့မလဲ...ဦးတဲ့လူလုပ်ထားဦးပေါ့ကွာ :P
( ဖိုးကြယ် )
ဘလော့ဂ်ဂါ ဆိုတာလေး သဘောကျမိလို့ နောက်တခေါက် ထပ်လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရသဘလော့ဂ်တွေ သဘောကျမိတာ အပြိုင်အဆိုင် ကင်းပြီး တယောက်နဲ့ တယောက်ခင်မင်ရင်းနှီးကြတယ်လို့ မြင်မိတယ်..။
ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ Create လုပ်နိုင်ကြသလို တယောက်နဲ့ တယောက် ဖေးမကူညီသလို ခံစားမိတယ်...။ တယောက်ရေးတဲ့ ကဗျာ၊ စာအစရှိသည်ကို တလေးတစား ကွန်မာန့်တွေနဲ့ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေ ပြတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
ကျွန်တော်နိုင်ငံရေး ဘလော့ဂ်ဂါ တယောက်အနေနဲ့ မြင်မိတာပါ...။ နိုင်ငံရေး ဘလော့ဂ်ဂါတွေ ကြားမှာတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြိုင်အဆိုင်တွေ မရိုးသားမှုတွေ သူများသတင်း၊ ကိုယ့်သတင်းလုပ်တဲ့သူတွေ၊ အဆင်းမှာ ဘီးတွန်းမယ့် သူတွေများနေသလားလို့ပါ..
ပိုစ့်နဲ့ မဆိုင်တာ ရေးမိတယ်ဆိုရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရသဘလော့ဂ်ဂါတွေရဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုကို လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်..။ ကျွန်တော်လည်း ရသလိုင်း ပြောင်းမလားလို့.. စဉ်းစားမိနေတာပါ...း)
D.M.W.Y လို့ပဲ ရေးထားခဲ့တဲ့ ကို Anonymous ရေ.....“ကျွန်တော်နိုင်ငံရေး ဘလော့ဂ်ဂါ တယောက်အနေနဲ့” လို့ရေးသွားပြီး လင့်ခ်ချန် မထားခဲ့တော့ ဘယ်လိုက်ဖတ်ရမှန်းလည်း မသိပါဘူး….။း)
နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လာဖတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံရေးဘလော့တွေလည်း သူ့ဟာနဲ့သူတော့ စာဖတ်သူကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ အကျိုးပြုနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သတင်းတွေဖော်ပြရာမှာ ရိုးသားမှုရှိဖို့တော့ လိုမယ် ထင်တယ်။ အယူဝါဒတွေ တစ်ဖက်စွန်း ရောက်လွန်းအားကြီးနေရင်လည်း မကောင်းဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးကိုနားလည်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်မက လူပိန်းသက်သက်အဆင့်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မအမြင်တော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အပြောကျယ်တယ်၊ ရှုတ်ထွေးတယ်လို့ထင်မိတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာမှ မရိုးသားတဲ့၊ မမှန်ကန်တဲ့ သတင်းမျိုးတွေဖြစ်နေခဲ့ဦးမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့လို လူပိန်းတွေအဖို့ရာမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အမြင်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သိနိုင်ဖို့ရာ၊ နားလည်နိုင်ဖို့ရာ ပိုလို့သာ အလှမ်းဝေးသွားမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ကျန်တဲ့တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆင်းဘီးတွန်းတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ တိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်နေကြတာတွေကိုတော့ ဘာမှမပြောလိုတော့ပါဘူး။
ကို D.M.W.Y အနေနဲ့ ရသဘလော့တွေနဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို အခုလိုမျိုး ချီးကျူးသွားတာလေးကို ပီတိတကယ်ဖြစ်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို မရေးချင်တော့လို့ ရသလိုင်းဘက်ပြောင်းမယ်ဆိုလည်း အားပေးပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ရေးလာတဲ့သူတစ်ယောက်မှာ ရသနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ရေးစရာ၊ ပြောစရာတွေအများကြီးရှိမယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ရသဘလော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း လက်တို့လိုက်ဦးပေါ့…. လာအားပေးရအောင်လေ…ရသဘလော့အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကြိုဆိုနေပါတယ်ဗျာ….။း)
ကျန်တာတော့ မပြောတော့ဘူး။ ဪ...ကို4-star ဆိုတာ မောင်လဘက်ရည်ကြီးကိုး....
ဂျင်းစုတ်က လူရွေးပြီး လည်ပင်းညှစ်တာတော့်....:)
ခုမှပဲ ရောက်တယ် အင်ကြင်းရေ..
မအင်ကြင်းရေးတာလေးသဘောကျတယ်။ အသုံးဝင်မယ့်ဟာလေးတွေ ရွေးတင်ပေးရင်း တခါတလေ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အပြောခံရတဲ့အခါ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာလေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့ အစ်မရယ်။ ဒါပေမယ့် အားပေမယ့်သူတွေရှိတဲ့ အခါကျတော့လည်း ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ဘလော့ဂါဆိုတာ ယူတတ်ရင်တော့ အများကြီးပါပဲ။
အစ်မဒီထက်ပိုပြီး ဘလော့လေးတွေ တင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
ဒီက လေ.. နာမည်ကျော်..
ဘလော့ဂါလေး ဂျာဂျာဂျင်းပါ "လို့ .. ချိုချိုသာ ရယ်သံလေးနဲ့
ထပ်ရောက်တယ်ဗျာ.. လင့်ခ်ထားခဲ့ပါဆိုလို့ ထားခဲ့ပါတယ်...
ဘလော့ဆိုတာနဲ့ ဘလော့ဂါဆိုတာ ကို လေးလေးနက်နက်ဖတ်သွားတယ် အမရေ....
ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ရေးတာ(စာရေးတာ) ၄ လသက်တမ်းပဲရှိသေးတယ်... စာရေးရင် ဘလော့ဂါဆိုရင် အခု ဘလော့ဂါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်.. :D
သယ်ရင်းတစ်ယောက် ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ အယ်ဒီတာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖူးတယ်.. နောက်တွေ့တိုင်း သူက ဘလော့ဂါကြီးလို့ ခေါ်တိုင်း မြောက်မြောက်တက်သွားတယ်.. ဟီး (လူတွေကြားထဲမှာ နည်းနည်းတော့ အထင်ကြီးစရာပေါ့လေ..:))